Tannenberg neVerdun vane zvigadziriso zviripo pane Steam | Linux Vakapindwa muropa
Kune mitambo miviri nezveHondo Yenyika II iri kupa hurukuro zhinji muLinux nyika, uye iwo mazita maviri akagadzirwa neM2H neBlackmill Games studio. Yokutanga inonzi Tannenberg uye wechipiri Verdun, vese vatove neyekuvandudza pane iyo Steam chitoro. Unogona here kuona iyo inotisvitsa M2H yeTannenberg mune iyi link uye iyo ye Blackmill Mitambo yeVerdun mune izvi zvimwe, zvese pamwe nekuvandudzwa kwekuwedzera mashandiro neiyo Unity graph injini.
Nezve iyo yekuvandudza ye kubatana, ese ari maviri mazita zvino anomhanyisa Unity 2017.3.1p1 injini, imwe yazvino vhezheni kupfuura iyo yapfuura vhezheni, sezvo ivo vagadziri vanga vachishanda pane ino gadziriso kuendesa nyowani yekuita yekuwedzera yemazita ese ari maviri, ayo anofungidzirwa kuve ari kutenderedza a 10 kana 25% zvirinani zvinoenderana ne Hardware uye nekugadziriswa kwemutambo watakasarudza. Iko kukuru kuvandudza pasina kupokana ...
Zvechokwadi Tannenberg inoda yakanaka Hardware kushanda nekuda kwehunhu hwayo hwakajeka, uye zvirokwazvo mashandiro acho haasi akanakisa, saka chero shanduko inokosheswa. Uye zvakare, zvinoenderana nemepu imwe kana imwe, mashandiro acho anogona kusiyana, sezvo tichigona kuwana mepu dzinoshanda zvakanaka pa100FPS uye mamwe mepu akakura asingapfuure 40-50FPS kuti ave mvura, saka zvimwe hazvidiwi kune vakawanda varipo vatambi . Nenzira, ivo vakavandudza yavo AI neiyi yekuvandudza, kwete zvese kuita uye magirafu.
Tannenberg zvakare inoita kunge iine mamwe matambudziko asinganzwisisike andinofungidzira kuti achavandudzwa mune ramangwana kugadzirisa, zvisinei iwo haasi matambudziko akakomba asingatibvumidze kutamba zvakati wandei, asi madiki matambudziko anogona kuchinja maitiro ehunhu hwatinobata. Vhura kana zviri zveVerdunZvinotaridza senge zvinoshanda zvakanyanya kuyerera uye pasina izvi zvidiki zviputi, kunyangwe mune mamwe ma distros isu tinogona zvakare kusangana nematambudziko. Nezve izvi ini handidi kuodza moyo vanhu kuti vasazvitenge, iwo madiki madiki achagadziriswa, asi ndinoda kunyevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Tannenberg neVerdun vane zvigadziriso zviripo pane Steam
Verdun yakagadzirirwa muHondo Yenyika Yekutanga.
Uye, ini ndanga ndisingamuzive, asi ini ndinoona izvozvi kuti Tannenberg inomuzivawo.
Waini 3.3 kusimudzira kuburitswa kunotanga nerutsigiro rweVulkan